musha Africa Singers 2Baba Vechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeMunhu weNigerian Anonyanya kuzivikanwa neNicknames "2Baba & 2Face".
Yedu vhezheni yeInnocent Idibia's Biography Chokwadi, kusanganisira Nyaya yake Yehudiki, inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko zvemazuva ake ehujaya. Isu tinozoenderera mberi nekukuudza kuti 2Face yakabudirira sei.
Ongororo ye2Baba's Bio inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nyaya yehupenyu pamberi pemukurumbira, kusimuka kune mukurumbira nyaya uye nhoroondo yekufambidzana. Zvikuru, Hupenyu hwemunhu weLegend, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvisingazivikanwe chokwadi nezvake.
Ehe, munhu wese anoziva nezve yake yakasarudzika uye yakasarudzika mimhanzi kuita. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga 2Baba's Biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
2Baba Vechidiki Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Kutanga kubva, Innocent Ujah Idibia akaberekwa musi we 18th waSeptember 1975 kuJos, muPlateau State, Nigeria. Ndiye wechipiri pavakomana vana vakazvarwa naamai vake, Rose Idibia nababa vake, vakanonoka Mr Michael Idibia. Tarirai, vabereki va2Face.
Benue Family Origin:
Nyika yeNigerian yedzinza reIdoma ine midzi yekuWest Africa yakakurira kuJos, Plateau State kwaakakurira pamwe nehama dzake nhatu; Hyacinth, Stephen, uye Oche Idibia.
Kukura muJos, 2aba yaive neshamwari zhinji dzainyanya kufarira mimhanzi pamwe nenhabvu uye vaiwanzotsvaga mukana wakashoma wavanowana wekuteerera mimhanzi nekutamba nhabvu.
2Baba Dzidzo Uye Basa Rekuvaka:
Nezve kumashure kwe2aba, akanyoreswa kuMount Saint Gabriel's Sekondari kuMakuru, Benue state kwaakawana chitupa chake chesekondari mu1992.
Akazoenderera mberi kuita chirongwa chegore-pre-degree remedial chirongwa kuYunivhesiti yeJos mu1994.
2aba achiri kuchikoro chepamusoro paMount Saint Gabriel, akaumba boka rakanzi "Black University" aine shamwari dzake nhatu.
2aba pamwe chete nenhengo dzeboka rake vaigara vachiita pamitambo yakasiyana uye mapato akarongeka muchikoro chake panguva iyoyo.
2Baba Vokutanga Basa Rekuita:
Nguva pfupi apedza kudzidza kuchikoro chesekondari, uye paakange achitsvaga kupinda muchikoro chepamusoro, 2aba akaumba mubatanidzwa newaaimbova naye, Augustine Ahmedu (BlackFace).
2aba naBlackface vakatanga kuita pachiratidziro chesekondari muOtukpo neMakurdi iine zita rechitambo "InniRaps" uye "Barrister The Pirate" zvichiteerana.
Pasina nguva refu mushure mekunge 2aba uye blackface vaumba mubatanidzwa, 2aba yakazobvumidzwa kunodzidzira National diploma muBhizinesi manejimendi kuInstitute of Management uye Technology (IMT), Enugu nyika.
Akabatana zvakare neshamwari yake - BlackFace - uyo aidzidzawo paIMT uye vakaramba vachiita mashoo akasiyana akatenderedza Enugu.
2Face Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Nekuda kwekubudirira kwekuita kwavo muEnugu, 2abaaba neBlackFace vakagadzira boka revarume vatatu rakanzi "Plantashun Boiz" ndokutamira kuLagos mushure mekugutsikana zvizere kuti vaifanirwa kuve vaimbi vakuru.
Boka idzva raisanganisira 2aba naBlackface avo vakatora mazita ematanho matsva - 2face neBlackFace zvichiteerana - pamwe naChibuzor Orji ane zita rechitambo Faze.
Zvinhu zvaifamba zvakanaka kuna Plantashun Boiz nekuburitswa kwenyaya yavo dhizaumu "Muviri neMweya (2000)" paDove Record uye yavo yechipiri albha "Kutengeswa Kunze (2003)" ivo vakaparara mugore 2004.
2Baba Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Nguva pfupi yapfuura kudonha kwaPlantashun Boiz, 2aba akabatana naKennis Music ndokuburitsa dambarefu rake roga reti rakanzi "Kutarisana neFace (2004)".
Iyo albam iyo yairatidza hit tracks se "Mfana Ibaga" uye "African Queen" yaive nemamiriyoni emakopi akatengeswa.
Nekukurumidza kumberi kusvika parizvino, 2aba ndemumwe wevane mukurumbira uye vanobudirira muAfro-pop muimbi mu Africa neake wekupedzisira asina kuroorwa anonzi "Frenemies" akaburitswa pazuva re20th raJune 2019, vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
2Baba Hukama Hupenyu:
2aba akaroora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezve yake yekufambidzana nhoroondo uye yazvino hukama chinzvimbo.
Kutanga nenhoroondo yake yekufambidzana, 2aba ave achibatanidzwa kune vasinga pfuure vakadzi vana kubva pakutanga kwebasa rake. Zvinosanganisira; Caroline Ekanem, Vien Tetsola, Pero Adeniyi, naSumbo Ajaba.
Kudanana kwa2aba nevakadzi vambotaurwa vakachinja mamama mamuche - Pero Adeniyi naSumbo Ajaba - kwakapa kuberekwa kwevana vake vashanu; Nino uye Ziyoni pamwe naJustin, akasimuka naInnocent naSumbo Ajaba naPero Adeniyi zvakateerana.
Nezve chimiro chake chehukama parizvino panguva yekunyora, 2aba akaroora Annie Macaulay mutambi weNigerian anokunda mubairo uyo akaonekwa mu2aba yeAfrican Queen Music Vhidhiyo. Vakaroora vakaroora mumutambo wega wega pazuva re2nd raMay 2012 muLagos.
Muchato pakati pe2Baba naAnne Macaulay wakapa kuberekwa kwevanasikana vavo vaviri vakanaka; Isabel naOlivia Idibia. 2Baba parizvino vane vana vanomwe panguva yekunyora.
2 baba vanobva kumhuri yepakati mhuri yemhuri. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba va2Baba:
Gare gare Michael Idibia aive baba va2Baba. akazvarwa pazuva re25th raJuly 1946 kumhuri yaVaMai naAmai Idibia Ije veAmufu Aijeba, muDunhu reEdumoga, Okpokwu LGA yenyika yeBenue.
Akashanda semushandi wehurumende neBenue state department yezvekurima uye haana kumbobvira aodza moyo mwanakomana wake kubva mukuita basa remimhanzi sezvinoita vabereki veNigeria.
Akarasikirwa nehupenyu hwake kumaoko anotonhora erufu mushure mekurwara nechirwere chekenza chakakomba pazuva rechisere Nyamavhuvhu 8.
Nezve amai va2Baba:
Rose Anebi ndiamai va2Baba. Iye anobva kuOgege Edumoga, Benue state uye akaroora murume wake, Michael Idibia muna Zvita 1972. Kuroora kwake naMichael kwakapa vana vavo vana kusanganisira 2Baba.
Nezve hama dza2Baba:
2Baba ine vakoma vatatu uye vasina hanzvadzi. Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezvemukoma wake - Stephen Idibia. Vanun'una vake Hyacinth naOche Ibidia vese vaimbi vakatevera nzira dzakaradzikwa nemukoma wavo, 2aba.
Nezve hukama hwa2Baba:
Kure kure kubva ku2Baba vepedyo mhuri, isiri s haholo inozivikanwa pamusoro paambuya vake nasekuru nasekuru ivo nasekuru vake baba vake ndi Mr na Mr Idibia Ije. Zvishoma anozivikanwa nezve babamunini vake nababamunini pamwe nababamunini vake nababamunini.
2Baba Yemunhu Hupenyu Chokwadi:
Chii chinoita kuti 2aba ikanganise? Gara kumashure apo isu tichikuunzira magadzirirwo ehunhu hwake kuitira kuti akubatsire iwe kuwana izere mufananidzo wake. Kutanga, 2Baba's persona isanganiswa yeVirgo zodiac maitiro.
Iye ane tarenda, anosetsa uye ane hunhu hunofadza. 2Baba ine zvido uye zvinokuvaraidza munhabvu.
Nyanzvi yemimhanzi mune dzimwe nguva airatidzira rudo rwake uye nezvaanofarira munhabvu nekutora chikamu muzvirongwa zvakaita seBhora Tarenda Kutsvaga kwaakaparura pamwe chete naKano Nwankwo vachishanda pamwe nekambani yeAirtel Telecommunications muna 2011.
2Baba ine mari inofungidzirwa kuti inokwana $ 22.5 mamirioni panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwa2Baba kunobva zvachose kubva mukuyedza kwake kwemimhanzi uye endorsement inobata nema brand senge Partner Mobile apo ongororo yemashandisiro ake mari inoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Kutanga nenhumbi dza2aba, ane dzimba dzinopfuura nhatu muLagos. Pakati peimba yake yakanaka uye inodhura kwazvo imba iri muBanana Island, nyika yeLagos. Anonzi akawana dzimba mbiri hombe muLagos state mu2017.
Muimbi wekuNigeria ane mota dzakawanda senge chena Ferrari Coupe uye Chevrolet corvette kutaura mashoma mune yake mota yekuunganidza.
Imwe yemotokari dzake yakaunzwa kwaari sechipo chemuchato naiye aive seneti purezidhendi weNigeria - Sen. David Mark. Chipo - cheyero Chevrolet Corvette Coupe - chaikosha pakati pe $ 70,000 ne $ 110,000.
2BORA Untold Chokwadi:
Nezvezita rake reStage:
2Baba akatanga yake yega mimhanzi basa aine zita remadunhurirwa rekuti "2face" muna 2004. Aizivikanwa kutenderera pasirese nezita rezita - 2face - kudzamara atora zita idzva renhandare - 2Baba - muna Chikunguru 2014.
2Baba akaberekerwa mumhuri yechiKristu uye akarerwa nevabereki vake mukutenda kwechiKristu. Iye anotenda zvakazara mukuvapo kweiye mukuru-Mwari - uye anoramba achirarama nekuziva kwekutenda kwake kwechiKristu.
Kuongorora uye KUSHAYA mabheji:
2Baba haisi yakawanda yekusvuta. Kunyangwe mune imwe yemubvunzurudzo yake yapfuura muna 2011 akareurura nekutora mbanje iyo yakamusimudzira.
Nekudaro, iye akareba akapa pamusoro penzira inoparadza uye anorarama hupenyu hwakachena panguva yekunyora.
2Face Tattoo Chokwadi:
2Baba yakaisa inki isingasviki matatu matatu akasiyana mairi mumuviri wake. Akainki nyora ine runyorwa "Kutenda" paruoko rwake mu2015. Iye zvakare ane anovhundutsa maatato akaiswa pachipfuva chake uye kumashure.
Thanks for reading vedu 2Baba Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!